ဖောက်စ်သတင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဖောက်စ်သတင်း (အင်္ဂလိပ်: Fox News; အသံထွက် - /fɒks/ or /fɑks/; တရားဝင်အမည် "Fox News Channel") သည် အမေရိကန် ကွန်ဆာဗေးတစ်အမာခံ သတင်းရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နယူးယောက်မြို့၌ အခြေစိုက်၍ ဖောက်စ်မီဒီယာအုပ်စုက ပိုင်ဆိုင်ပြီး၊ ထိုအုပ်စုကို ဖောက်စ်ကော်ပိုရေးရှင်းက ထပ်မံပိုင်ဆိုင်သည်။ အဓိကရုပ်သံလွှင့်စတူဒီယိုများမှာ နယူးယောက်မြို့၊ မဟတ္တန်အရပ်၏အလယ်ရှိ 1211 Avenue of the Americas အဆောက်အအုံကြီးတွင် တည်ရှိကာ ဖောက်စ်သတင်းသည် နိုင်ငံ ၈၆ ခုခန့်ကို သတင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
ဤရုပ်သံလိုင်းကို ဩစတေးလျ-အမေရိကန်သား မီဒီယာလုပ်ငန်းရှင် ရူးပါ့တ် မားဒေါ့ခ် (Rupert Murdoch) က ကွန်ဆာဗေးတစ်ပရိသတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်စေရန်တည်ထောင်ခဲ့၍ ယခင် ရစ်ပါဘလစ်ကန်ပါတီ မီဒီယာအတိုင်ပင်ခံနှင့် စီအန်ဘီစီရုပ်သံ အလုပ်အမှုဆောင် ရော်ဂျာ အေးလ်ဇ် (Roger Ailes) ကို စီအီးအိုအဖြစ် ငှားရမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ အောက်တိုဘာ ၇ တွင် စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ဖောက်စ်သတင်းသည် ၁၉၉၀ ဆယ်စုနှစ်အကုန်နှင့် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ကာလများတွင် အမေရိက၌ အခပေးကြည့်ရှုရသောလိုင်းများတွင် အင်အားကြီးမားလာသည့် သတင်းကွန်ရက်တစ်ခုဖ့စ်လာခဲ့သည်။ မားဒေါ့ခ်သည် လက်ရှိ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကဲဖြစ်၍ ဆူဇန် စကော့သည် စီအီးအိုအဖြစ် ထမ်းဆောင်လျက် ရှိသည်။
ဖောက်စ်သတင်းသည် ရစ်ပါဘလစ်ကန်ပါတီနှင့် ထိုပါတီ၏ နိုင်ငံရေးသမားများကို ဘက်လိုက်၍ တင်ဆက်ဖော်ပြပြီး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုမူ မကောင်းမြင်သဘောဖြင့် တင်ဆက်သည်ဟု ဖော်ပြခြင်းခံရသည်။ ခြုံငုံသုံးသပ်လျှင် ဤရုပ်သံသည် သတင်း၏ တည်ကြည်ခိုင်မာမှုကို အန္တရာယ်ပေးသည်ဟု ဝေဖန်သူများက ပြောဆိုကြ၏ ။ သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ် ထရမ့် သက်တမ်းအတွင်း ရုပ်သံသည် ထရမ့်အစိုးရ၏ အာဘော်ကို ပြန်လည်ဖောက်သည်ချခြင်းမှာ သိသာထင်ရှားသည်ဟု လေ့လာသူတို့က ဆိုကြလေသည်။ ပညာရှင်များကလည်း ဤရုပ်သံသည် နိုင်ငံပိုင်(အစိုးရပိုင်) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် နီးကပ်ဆင်တူသည်ဟု ညွှန်းဆိုမှုပြုကြသည်။
↑ "The Fox News Effect: Media Bias and Voting" (in en) (August 1, 2007). The Quarterly Journal of Economics 122 (3): 1187–1234. doi:10.1162/qjec.122.3.1187. ISSN 0033-5533.
↑ "The World Wide Web and the U.S. Political News Market" (in en) (2010). American Journal of Political Science 54 (2): 428–439. doi:10.1111/j.1540-5907.2010.00439.x. ISSN 1540-5907.
↑ "Partisan News, the Myth of Objectivity, and the Standards of Responsible Journalism" (July 2, 2020). Journal of Media Ethics 35 (3): 180–194. doi:10.1080/23736992.2020.1780131. ISSN 2373-6992.
↑ "Political Leaning and Coverage Sentiment: Are Conservative Newspapers More Negative Toward Women?" (2019). Social Science Quarterly 100 (1): 307–319. doi:10.1111/ssqu.12563. ISSN 1540-6237.
↑ Media Relations | Fox News (in en)။
↑ "Where in the World is FOX?" (in en-US)၊ Fox News၊ March 1, 2011။
↑ Mifflin၊ Lawrie။ "At the new Fox News Channel, the buzzword is fairness, separating news from bias"၊ The New York Times၊ October 7, 1996။
↑ Divisive Ailes gave conservativesaTV home at Fox News။ Reuters (July 21, 2016)။
↑ King၊ Angela G.။ "Fox Hunts TV News Niche with Channel Debut Today"၊ October 7, 1996။
↑ Gillette၊ Felix။ "Viewers Continuing to Flock to Cable News Networks"၊ The New York Observer၊ October 1, 2008။
↑ Steinberg၊ Brian (May 17, 2018)။ "Suzanne Scott Named CEO of Fox News"။ Variety။ May 17, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Reilly၊ Katie (July 21, 2016)။ "Roger Ailes Resigns From Fox News Amid Sexual Harassment Accusations"။ Time။ October 17, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Redden၊ Molly။ "Roger Ailes leaves Fox News in wake of sexual harassment claims"၊ July 21, 2016။
↑ Skocpol၊ Theda; Williamson၊ Vanessa (September 1, 2016)။ The Tea Party and the Remaking of Republican Conservatism။ Oxford, New York: Oxford University Press။ pp. 5, 8, 86, 123, 125, 130–140။ ISBN 978-0-19063-366-0။ the challenge of spreading and germinating the Tea Party idea was surmounted with impressive ease becauseamajor sector of the U.S. media today is openly partisan—including Fox News Channel, the right-wing "blogosphere," andanationwide network of right- wing talk radio programs. This aptly named conservative media "echo chamber" reaches into the homes of many Americans ... Towering above all others is the Fox News empire, the loudest voice in conservative media. Despite its claim to be "fair and balanced," multiple studies have documented FNC's conservative stance ... Fox News's conservative slant encouragesaparticular worldview.
↑ Jamieson၊ Kathleen Hall; Cappella၊ Joseph N. (February 4, 2010)။ Echo Chamber: Rush Limbaugh and the Conservative Media Establishment။ Oxford, New York: Oxford University Press။ ISBN 978-0-19539-860-1။ We do this to illustrate the ways Fox News, Limbaugh, and the print and web editorial pages of the Wall Street Journal play both offense and defense in service of conservative objectives. As these case studies will suggest, the big three reinforce each other's conservative messages in ways that distinguish them from the other major broadcast media, CBS News, NBC News, ABC News, CNN, MSNBC, CNBC and major print outlets such as the Washington Post and New York Times.
↑ Grossman၊ Matt; Hopkins၊ David A. (October 13, 2016)။ Asymmetric Politics: Ideological Republicans and Group Interest Democrats။ Oxford, New York: Oxford University Press။ p. 175။ ISBN 978-0-19062-660-0။
↑ Kludt၊ Tom။ "Fox News has avoided talking about Jared Kushner's security clearance"၊ CNN Money၊ February 28, 2018။ "The network claimsauniquely powerful role in the pro-Trump echo chamber, setting the agenda for both the president and his millions of supporters. In this vein, Trump is rarely cast in an unfavorable light and the so called "mainstream media" draws little praise. Bad news, like the one surrounding Kushner, routinely gets glossed over."
↑ "Propaganda, Persuasion, or Journalism?: Fox News' Prime-Time Coverage of Health-Care Reform in 2009 and 2014" . doi:10.1177/1931243117710278.
↑ Collings၊ Anthony (2010)။ Capturing the News: Three Decades of Reporting Crisis and Conflict။ University of Missouri Press။ p. 166။ ISBN 978-0-8262-7211-9။
↑ McCollum၊ Jonathan; Hebert၊ David G. (2014)။ Theory and Method in Historical Ethnomusicology။ Lexington Books။ p. 95။ ISBN 978-1-4985-0705-9။
↑ Mayer၊ Jane (March 4, 2019)။ "The Making of the Fox News White House"။ The New Yorker။ October 17, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Boot၊ Max (August 8, 2017)။ "Fox News Has Completed Its Transformation Into Trump TV"။ Foreign Policy။ October 17, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖောက်စ်သတင်း&oldid=716360" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။